भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भए पनिकांग्रेसको जिल्ला सभापतिमा विजयी – Karnalikhabar
सर्लाहीको मनसुरा सिँचाइ आयोजना वरपरका करिब १८ हजार सालका रूख कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यद्वय भूपेन्द्रप्रसाद राई र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले २०७१ पुसमा सिंहलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सिंह २०५० मा आयोजनाको मानपुर ब्यारेज नहर खण्डको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य दलहरूले तत्काल विधान संशोधन गर्न नसके पनि आगामी निर्वाचनमा यस्तो आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने नहुने बताउँछन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेकै बेला सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचन लडेर विजयकुमार गच्छदार विजयी भए । ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बित भए ।
अघिल्लो - एसएस राजामौलीलाई कस्तो लाग्यो प्रभासकाे राधे श्याम ?
मलाइका ले खोलिन् बेडरुमको राज, केटाको बिषयमा भन्छिन् – दाह्री भएको केटा मन पर्छ - पछिल्लो